Amanye Amabanda aweMDC Alliance Akhala Ngokuqilwa
Inengi lamabandla akumanyano owe MDC Alliance afana labo Transform Zimbabwe, ele People’s Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti kanye lele MDC elikhokhelwa ngu Proffessor Welshman Ncube, asola umkhokheli we MDC – T umnumzana Nelson Chamisa embeka umlandu wokuphambuka kulokho abavumelana kikho.
Kodwa abe MDC – T ekhokhelwa nguChamisa bayalandula inkulumo zamanye amalunga walumanyano zokuqilwa, ekubhaliseni abamele bancintise kukhetho lwamalunga edale lephalamende.
Kodwa umgcinisihlalo we MDC Alliance umnumzana Morgen Komichi uthi akusi qiniso lokho okutshiwo yinkokheli yamabandla la.
Okukhona u Komichi uthi yikuba kwangeniswa amalunga alesisindo kulezo zigaba lamaward ngenjongo yokuthi banqobe ukhetho lukaNtulikazi 30.
Saguqula lowo owayekhethiwe ukuba amele isigaba se Mzowe South lapho kwakukhethwe khona u Faith Chakwela,e Mazowe West bekulo Tamari Chimanzi kuthi e Mazowe North kwakubekwe u Tinashe Muchuri. Laba bantu kabaziwa nguzulu wakulezo zigaba,ngakho belifuna senzeni,singene kukhetho labantu abangaziwayo besesidliwa kukhetho? Lifuna sithabise abantu abalutshwana nje kumbe sithabise abantu bakuleso sigaba? Kungakho senza leyo nguquko esayenzayo.
Kodwa ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi akumangalisi okwenzakalayo ku MDC Alliance. Omunye walezingcwethi ngumnumzana Bekezela Gumbo osebenza ephansi kwenhlanganiso ye Zimbabwe Democracy Institute – ZDI.
Indaba le esisenzakala ku Alliance ukuthi I MDC ka Chamisa isinjani,isijwamula ama seats ithathela ama Alliance members,yindaba mina engayibona kudala ukuthi izakwenzakala. Ngenxa yokuthi uyakwazi ukuthi khathesi sekuyi last minute,abantu laba ama Alliance Partners engaze equalise ukuthi esfuna ukuzimela ewodwa,akusoze kubancede ngoba abantu boina sebejwayele ukuthi bazovhotela umuntu we Alliance. So yinto kade siyikhangelele ukuthi izoyenzakala ikakhulu,u Ncube nguye kade singakhangelelanga ukuthi uzathathelwa ama seats but laba abanye besikhangelele ukuthi engakwenza especially ngomuntu onjengo chamisa ungani ufuna I power kakhulu.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi akumangalisi osokusenzakala kuMDC Alliance bethi bekuvele bekukhangelele ukuthi kungenzeka. Ezinye zazo zisithi kodwa ziyavumelana lokunye kokwenziwa ngabe MDC-T ngoba kungasizi lutho ukuthi kuyiwe kukhetho kubekwa abantu abazamela I umanyano owe MDC Alliance bengaziwa nguzulu njalo bangasoze banqobe.
Udaba lwenxabanxoza ekuMDC Alliance siluphiwa nguMavis Gama